Indlu yedolophu yaseSicilian-"I-BoltHole"
Eli likhaya lethu leeholide, yindlu yedolophu elula kodwa ekhululekileyo kwidolophu yaseSicilian eqhelekileyo kwaye abamelwane bethu baluncedo kakhulu kwaye bamkelekile. Sonwabele iiholide zethu apha iminyaka eyi-8 kwaye siyathanda ukwabelana ngeendwendwe ezingathanda ukufumana ubomi bokwenyani baseSicilian.
Umgangatho wokuqala unegumbi lokuhlala elincinci kunye neplani evulekileyo yokutyela ikhitshi. Umgangatho ophantsi unamagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlambela elincinci. Kukwakho ne-terrace ekungenwa kuyo ngeleli kunye nocango lomgibe. Le yindawo ekufuneka ube kuyo ekutshoneni kwelanga- impepho epholileyo kunye nokujonga inqaba kunye neenduli ezingqongileyo ziya kuba sisiphelo esigqibeleleyo sosuku lwakho! Nanjengoko eli ilikhaya lethu leeholide uya kufumana izinto ezininzi ongenakuzifumana kwindawo 'yokuziphekela', njengemidlalo, iincwadi zokupheka, imifuno neziqholo kunye neencwadi ezishiywe zezinye iindwendwe ngokutshintshiselana ngazo. Siyakwamkela kwaye siyathemba ukuba uya kuyithanda njengokuba sisenza!
Ndiqinisekile ukuba uyakuyonwabela imaze yezitrato ezityetyisiweyo. Zininzi iicafes kunye neebhari ezinikezela ngeepastries, iikeyiki ezimnandi kunye neecocktails. Kukwakho indawo yokutyela elunge kakhulu kwiivenkile eziziinkozo ze-origobnal zenqaba edume kakhulu kwaye ibonelela ngokutya okukhulu kwasekhaya kunye neepizza.
Abamelwane bethu abathandekayo bahlala bekho xa kukho into oyifunayo.